Sylvi Listhaug: “Halaga mamnuuco xijaabka iskuuladda carruurta ee Noorweey!” | Somaliska
Sylvi Listhaug: “Halaga mamnuuco xijaabka iskuuladda carruurta ee Noorweey!”
Haweeneyda u qaabilsan dalkaasi Noorweey isdhexgalka iyo laanta socdaalka Sylvi Listhaug, ayaa so jeedisay hinde ay ku dooneeyso in iskuuladda dalkaasi laga mamnuuco xijaabka ay xirtaan muslimiinta.
Haweeneydan oo sheegtay in ay damacsan in talaabo ceynkaas la qaado, ayaa hadan ku goodisay in waalidka loo ciqaabyo haddii ay u hogaansami waayaan. Waxeey sheegtay in ay tahay arrin laga murugood in gabdhaha yar yar loo xiro maryo xijaab kuwaas oo karkooda laga askaturayo ragga waa sida ay hadalka u tilmaantay e.
Hadalka wasiiradan ayaa waxaa aad uga guuxay urrurada dalkaasi ee u dhaq dhaqaaqa xauuqdda aadanaha, waxaana ka mid ah dadkaasi ah Anine Kierulf oo ah madaxa hey’ad u dooda xaquuqda aadanaha ee Noorwey, ayaa dhankiisa tilmaamay in hindisaha wasiiradu yahay mid looga dhacayo xaquuqda aadanaha kana hor imaneeysa xaquuqul insaanka qaaradda Yurub.
Inkastoo falalka mamnuucista xijaabka ee dalalka ku yaala qaaradda aannu aheyn wax cusub hadana waxaa sanadkan hirgalay go’aan ay maxkamadda Midowga Yurub ku gaartay kaas oo xaquuq siinaya in shaqo bixiyeyaasha qaaradda ay xijaabka ka mamnuuci karaan goobaha shaqo. Saas oo ay tahayna waxaa ay Noorweey ka mid tahay dalalka sharciyo adag ka soo saara ajaanibta gaar ahaan muslimiinta dalkaasi.
Masaajida Sweden oo codsaday in amaankooda la kordhiyo
Midowga Yurub: “Shaqo bixiyeyaashu xaq ayeey u leeyihiin ineey xijaabka ka mamnuucaan goobaha shaqada”
Madaxihii hore ee sirdoonka Denmark oo dhaleeceyey wasiiraddii socdaalka